Samachar Batika || News from Nepal » समाज
६ बैशाख २०७८, सोमबार १२:५८
काठमाडौं – चर्चित हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको परिवारका पाँच सदस्यमा कोरोना देखिएको छ । श्रेष्ठले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिँदै परिवारका पाँच सदस्यमा कोरोना देखिएको बताएका हुन् । उनले लेखेका छन् “म लगायत मेरा छोरा, छोरी, बुहारी र नातिनी पाँचै जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भइसके पछि.....
४ बैशाख २०७८, शनिबार १३:५७
विगत एकवर्ष देखि क्यान्सर रोगसँग ल'ड्दै आएका आफ्नो श्रीमानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफ्नो अबोध छोरालाई बाबू खोइ मामु भन्दा के जवाफ दिने दाजु भन्दै चिन्तित अवस्थामा अहिले काठमाण्डौंको पशुपति क्षेत्रमा काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा उनले भनिन् । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कोभिड वार्डमा कार्यरत.....
२९ वर्षकी हजुरआमा निर्मलाको वास्तविक कथा हो यो !
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०५:५९
बाल्यकालमा निर्मलाको एक थान रहर थियो- अरू केटाकेटीसँगै स्कुल जाने।उनी स्कुल जान पाएकी पनि थिइन्।स्कुल जाँदा उनले एउटा सपना पनि बनाएकी थिइन्- ठूली भएर सरकारी मान्छे हुने। कसैको जिन्दगीमा धो’को पूरा नहुँदै परिस्थितिले धो’का दिन्छ। त्यही परिस्थितिमा खुम्चिएर सपना मनको अँध्यारो सुरूङमा पस्छ। कैलालीको.....
नक्कली डक्टरले जब नि:सन्तानलाई आँखै अगाडि सम्बम्ध बनाउन लगाए पछि ..
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०५:५३
एजेन्सी । सन्तान नभएका दम्पत्ति आफ्नो सन्तान प्राप्तीका लागि चिन्तित भई अनेक उपायमा लाग्छन् । त्यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ । एक निसन्तान दम्पत्ति उपचारको लागि कथित डाक्टरकोमा गए । निसन्तान दम्पतीको उपचार गर्ने डाक्टरले आफ्नै अगाडि सम्बन्ध बनाउन लगाए । डाक्टरले कसको गल्ती कहाँनिर छ भनेर हेर्न चाहेको.....
काठमाडौंमा केटीहरुले दिउसै खुलेआम गर्दा रहेछन यौ.. धन्दा
१८ चैत्र २०७७, बुधबार ११:५३
यौ’नध’न्दा हुने यी ठाउँमा ‘दलाल’ हरुको बिगबिगी छ । ग्राहक र यौ’नक’र्मी, यी दुई पक्षका बीचमा बसेर नाफा खाइदिनु उनीहरुको दैनिकी बनेको छ । बसपार्क र रत्नपार्कका आसपासमा साँझको समय एकैछिन् उभिए मात्रै पुग्छ, तिनीहरु तपाईँमाझ आफैँ आइपुग्छन् । तिनीहरुको प्रश्न हुनेगर्छ, ‘दाई के चाहिएको हो ? केटी चाहिएको भए.....
१८ चैत्र २०७७, बुधबार ०४:४४
आफैले रोजेको केटासित उनले बिहे गरेकी थिइन् । सबथोक ठीकठाक चलिरहेको थियो । विवाह गरेको २ वर्षमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवार औधी खुसी थियो । तर श्रीमान श्रीमती दुवै बेरोजगार हुँदा परिवार चलाउन समस्या भयो । उनीहरूबीच बेला-बेला वि’वाद पनि हुन थाल्यो ।आर्थिक सम’स्याका कारण परिवारमा त’ना’व भएपछि माइतीको सहयोगमा.....
बाग्लुङ ग्या’ङ फा’इट: भिरबाट फालिएपछि रूखको लहरामा झुन्डिएर बाँचेका तिलक बताए घटनाको नालीबेली
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०३:२५
बाग्लुङमा आइतबार 'ग्या’ङ फा’इट' हुँदा भिरबाट फालिएका प्रकाश कुँवर र दीपक परियारको ज्यान गयो। त्यही भिरबाट फालिएका तिलक कुँवरले भने एउटा रूखबाट लत्रेको लहरा समातेर आफ्नो ज्यान जोगाए। बाग्लुङ निसिखोला- ७, राजकुतका तिलक अहिले काकाको बरखीमा छन्। रङ लगाउन नहुने भए पनि उनी साथीहरूसँग फागु खेल्न निस्किएका.....
विवाह गराउँदा बेहुला-बेहुलीको नागरिकता र जन्मदर्ता माग्ने पण्डित (भिडियो हेर्नुस्)
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०१:५१
काठमाण्डौ । नेपालगञ्जबाट पूर्वतिर झण्डै एक घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बिनौना गाउँ । वरपर गहुँबारी, त्यही बारीको बीचमा छ पुरोहित ताराप्रसाद शर्माको घर । इँटाको गारो र टायलले छाएको चिटिक्कको घर । आँगनमा भैँसी र बाख्रा । आँगनमा डोरीले बनाइएको खटियामा बसिरहेको अवस्थामा भेटिनुभयो,.....
श्रीमानको निधन पछि देवरसंग दोस्रो विवाह, घर फर्कदा भएको दुर्घ’टनामा बेहुलीको पनी मृत्यु
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०१:२१
एजेन्सी । जिवनमा आएको खुसी एक दिन पनि पुरा हुन नपाउँदै महिलाले संसार छोडेकी छन् । श्रीमानको नि’धन पछि दोस्रो विवाह गरेको भोलीपल्टै महिलाको पनि दु’र्घटनामा निधन भएको छ । यो घटना यूपीको फर्रुखाबाद जिल्लामा भएको हो । अनियन्त्रित कार रूखमा ठ क्क र खा ए र दु’र्घटना भयो जसमा वेहुलीले ज्यान गुमाइन् । गत बर्ष उनको.....
एउटै युवतीसंग विवाह गर्न भन्दै एकैपटक ४ वेहुला जन्ती लिएर पुगे
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १२:५८
एजेन्सी । एक युवा विवाहको मिति तय भएको दिन जन्ती लिएर वेहुली लिन हिँडे । जव वेहुलीको घरमा जन्ती पुग्यो वेहुलीको घरमा ताला लागेको थियो । जन्तीले वेहुलीको नाम लिएर त्यहाँ छिमेकीलाई सोधे । छिमेकीले त्यो नामको युवती गाउँमा नभएको जवाफ दिए । त्यसपछि जे कुरा पत्ता लाग्यो वेहुलाको होस् उड्यो । यो घ’टना भारतमा.....